Kabar Aye Executive Residence (KER) (Living Sqrare Co.,Ltd) | iMyanmarHouse.com
Kabar Aye Executive Residence (KER)
16201 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး
လှပတင့်တယ်ခန့်ညားသော နေအိမ်နှင့် နေချင်မည့် သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေ တကယ်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KER အဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထင်ကရ အဆောက်အအုံတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး၊ အဆင့်အတန်းမြင့် ကမ္ဘာကျော် Branded ပစ္စည်းမျိုးစုံနှင့် အနုစိတ်သပ်ရပ်စွာ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ KER ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသည့် ကျေနပ်ပိတီဖြာသော အိမ်မက်ကမ္ဘာထဲမှ သာယာလှပသော မိသားစုဘဝအားပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါမည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် အမေရိကနိုင်ငံ NASA ၏ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ မှတ်တမ်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားသော မြေငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု့ 97Z2B CODE ဖြင့်အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားခြင်း
ရာသက်ပန် ပိုင်ဆိုင်နိုင်သော ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဦးဆုံး အရေးပေါ်သုံးနှင့် ကျန်းမာရေးသုံး ရဟပ်ယာဉ်ကွင်း ပါရှိခြင်း
360 မြင်ကွင်းအား အပြည့်အဝခံစားနိုင်သော ၂၁ ထပ်တွင် ရေကူးကန် နှင့် အားကစားခန်းများပါရှိခြင်း
မီးလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ထားသည့် Firemen Lift ဓါတ်လှေကားပါရှိခြင်း
ကမ္ဘာ့စံနှုန်းနှင့်အညီ အခန်းတိုင်းတွင် မီးလောင်ခဲ့လျှင် အလိုလျောက် ရေပက်ဖြန်းမီးငြိမ်းပေးသော Sprinkler များတပ်ဆင်ထားခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ Trane ၏ VRF air-con system အားသုံးစွဲထားသဖြင့် အောက်စီဂျင်ပြည့်ဝ၍ ပြီးပြည့်စုံသော လူနေမှု့ဘဝအားပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း
Living in auspicious building, the life you always dreamed of living is within reach. One of the landmark Kabar Aye Executive Residence, the city’s luxurious brilding in every detail, with spectacular views as well as the honourable design of Japanese Architect ready to be owned by your executive choice. Residences range from2to5bedrooms (from 1100 sqft. to 31266 sqft.), featuring fully furnished interiors, RF security doors system & earthquake resistant design with UBC-97 Zone 2B.
Executive amenity pool and yoga house and gym for health & relaxation
Getting relax your mind and body swimming inaamenity pool while you see the bird-eye view of Yangon in 360 degree. Take the power of mind playing yoga or have regular exercise in gym.
ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ရာသက်ပန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း၊ (၂၄) နာရီ အရန်သင့်အသုံးပြုနိုင်သော ကိုယ်ပိုင် Generator, Transformer နှစ်စုံစီ အပြည့်အဝထားရှိပေးခြင်း
စင်ကာပူနိုင်ငံ Marina Bay Sand နှင့် Dubal ရှိ Singature တာဝါကဲ့သို့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် အဆင့်မြင့် အဆောက်အဦးများကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည့် Global Gaint Teams များနှင့် ပါဝင်ဆောက်ရွက်ခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ NASA အဖွဲ့အစည်း၏ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်အတွင်းမှ ငလျင်မှတ်တမ်းများ၊ နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော် အတွင်းမှ လေပြင်းဒဏ်မှတ်တမ်းများကို အခြေခံပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ထားခြင်း
သွားလာရေးလွယ်ကူပြီး အချက်အချာကျသည့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ နှင့် ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မည့် ပထမဦးဆုံး ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းပါဝင်သော အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးဖြစ်ခြင်း
အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မီးလောင်ဒဏ်ခံနိုင်သည့် ဓါတ်လှေကား ပါဝင်ခြင်း၊ သင့်မိသားစုလုံခြုံရေးအတွက် (၂၄) နာရီ ပတ်လုံး CCTV နှင့် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများဖြင့်စောင့်ကြည့်ပေးခြင်း
အခန်းတိုင်းတွင် မီးဘေးကာကွယ်ရေးအတွက် Sansor နှင့် Sprinkler များတပ်ဆင်ထားခြင်း၊ သာမန် Split type ထက်အရည်အသွေးအထူးသာလွန်မြင့်မားသော VRF Aircon system အားတပ်ဆင်ထားခြင်း
Card Access System of Lift
5 Stories of Branded & Signature Shopping Complex
Open to sky view Swimming pool at 22nd storey
Gym & Spa, Yoga Corner at 22nd storey
Heliport at Roof top for emergency health care and evacuation system
Convenient, comfort, security and varieties of choices2bed rooms type to6bed rooms type
Branded Retail Shops, Food & Beverage Branded cosmetics, perfumes, wears, electronic goods Furniture, book & international cuisines
Do you remember the day of separate?
There isaanswer for someone who remember the day of separate house. Duplex, Only4rooms in the whole building with the effective wide area and partition.
Specifications for The Units
Living & bed : Teak Parquet
Balcony : Marble
Bath & WC : Marble
Main Door : Stainless steel door
Room Door : Teak door
Bath & WC Door : Aluminium door+ Glass door for shower area
The LOOK of fully furnished
For those who want to feel and touch the upmost pleasure of luxury, grand living and impressive. Energize oneself with the magic of colour and curve of the Japanese Architecture’s Creation.
Indulge with Integrity
Powder coated Aluminium frame window with laminated Tempered Glass
Kitchen Cabinet, Induction cooker, Exhaust hood& hob ,Refrigerator, Sink & tap
Wall paper+emulsion paints
Water Closet set, Basin & tap
Rain shower , hand shower
Bath tub, Towel rail
Bed+Mattress, Pillow, Blanket
Integrated Kitchen Studios
Location Project Map
65 Kabar Aye Pagoda Road, Mayan Gone T/S, Yangon
Gamone Pwint Shopping Centre
Board Way Internationsl School
Living Sqrare Co.,Ltd